Kwatingawana Rudo Ruchiri muLondon
Rudo runovhara pa Barnes Railway Bridge. John Phillips / Getty Images
Rudo rwekudzivirira inzira inoratidzirana yevakaroorana kuti vataure kuti rudo rwavo runogara nekusingaperi uye harugoni kuputswa. Mabhiriji ndiyo nzvimbo chaiyo yevakaroorana vanodikanwa kuti vashandise sezvo iwe unogona kuisa pikicha kune bhiriji wozokandira zvitubu murwizi pasi.
Pfungwa iyi yave yakakurumbira muEurope kubvira pakutanga kwe2000 uye vamwe vanoti Pont des Arts bridge muParis ndiko kwatakatanga. Rudo runovhara kana rudo rwechirwere zvino rwanowanzoonekwa mumitambo yechato sezvo chiratidzo chinoshanda zvakanaka kune vakaroorana vanoita nguva yakareba kuzvipira. Zvakanga zvamboitwa pamwe chete muchivande usiku ikozvino mhemberero inoitwa masikati makuru pamwe chete nemifananidzo nemavhidhiyo.
Vamwe vakaroorana vanoshandisa podhi yepamusoro uye vanyorera kana kupora mavambo avo pairi uye vamwe vane zvipfeko zvakakoshwa zvakanyorwa nezuva ravakashanyira.
Nepo rudo rwekudzivirira runogona kuonekwa muLondon hapana nzvimbo iri pedyo nevakawanda seVenice neRoma apo hurumende dziri kupedza nguva yakawanda uye mari ichibvisa kuvhara sezvo ichi chichikuvadza mabhiriji ezvakaitika kare.
Isu takapoteredza nzvimbo dzakakurumbira kududzira rudo rwako pane bhiriji rinoratidzika reLondon.
Yubile yeJubheri Bridge
Iri bhiri rinotsigira Southbank ku Charing Cross station uye The Embankment kuchamhembe kweRwizi Thames. (Hungerford Bridge ndiyo bhiriji yezvitima inofananidzwa.) Uyu hausi bhiriji yakakurumbira nokuda kwekuvhara rudo asi pane nguva dzose zvishoma kuonekwa.
Maonero akanaka: Tarisa kumabvazuva ku Waterloo Bridge uye uri kure, unogona kuona St Paul's Cathedral . Imba yeRoyal Festival inotarisa kunzvimbo yakanaka kuSouthbank.
Pane chimwe chinhu chingaona? Usapotsa 'skateboard graveyard' uko mauto epa skateboarders anokanda mapuranga pamusoro pebhiriji pavanoputsa.
Nearest tube stations: Waterloo (kurutivi rwezasi rwerwizi) kana Embankment (kurutivi rwokumusoro).
Mirayiridzo: Kana iwe uchida kuona imwe nzvimbo yekudzivirira nzvimbo muLondon zuva rimwechete pano pano mazano kune imwe nzvimbo inotevera: Tora bhasi reRV1 kubva kumashure kweLondon Eye / Royal Festival Hall kusvika kuTate Modern .
Tate Mazuva Ano uye Millennium Bridge. Alan Copson / Getty Images
Bhiriji idzva iri mhiri kweRwizi Thames muLondon, iyi bhidhiyo yepaguru inosanganisira Tate Modern kumaodzanyemba kwerwizi kusvika kuSt Paul's Cathedral kumusoro.
Maonero akanaka: Mabheji ose erwizi anotarisa kubva kubhiriji. Farira maonero eTate Mazuva ano uye Globe Theatre pabhangi rekumaodzanyemba uye St Paul's Cathedral, Sir Christopher Wren's masterpiece nechokumusoro kwerwizi.
Pane chimwe chinhu chingaona? Kana mhepo iri kunze, tarisai vanhu mudlarking kumusoro kuchamhembe kworwizi. Iwe uchada reisensi yekubatana nayo uye iwe uchada kutarisa kuti marwi inzira yakareba yakatanga. Uyewo nechokumaodzanyemba, tsvaga 'Mufaro Wemafaro' unofamba uri pedyo nechepamusoro pasi pebhiriji. Kana iri kushanda, yakasununguka kushandisa.
Nearest tube stations: Southwark (kurutivi rwekumaodzanyemba) -tevera mashizha emarandamende anotungamira kuTate Modern-kana Blackfriars (kurutivi rwokuchamhembe).
Mirayiridzo: Kana iwe uchida kuona imwe nzvimbo yekudzivirira nzvimbo dzemuLondon zuva rimwechete pano pano mazano kune imwe nzvimbo inotevera: Famba kupfuura Shakespeare's Globe neBorough Market, yakapfuura kuLondon Bridge, pedyo neHMS Belfast uye zvakare City Hall vasati vasvika Tower Bridge .
Ichi chiratidzo cheLondon ibhiriji rinoshandiswa nemotokari, mabhazi, motokari, mabhasikoro uye vanofamba-famba. Tower Bridge yakavhurwa muna 1894 uye simbi yakave yakagadzirwa mufananidzo webhuruu nemuchena muna 1977 ye Queen's Silver Jubilee. Uye cherechedza, haisi London Bridge - iyo ndiyo yakajeka bridge bridge kumavirira.
Tower Bridge inomuka nguva dzose saka chengeta purogiramu yekusimudza mberi kwekufamba kwako. Uye tarisa kumusoro semakona marefu ari iye zvino ane magirasi egorosi pasi mukati.
Maonero akanaka: Tarisa kumusoro kuti uone makwande eWorld Bridge, kana kutarisa kumusoro kuchamhembe kweLondon uye kumaodzanyemba kuguta reMuzinda (ndiyo girazi rakagadzirwa nemirazi pamagungwa).
Pane chimwe chinhu chingaona? Pane zvakawanda zvakanaka maonero kubva bhiriji iyi saka ingotora zvose zvirimo. Uye fungidzira kuzvikepe zvinopfuura pasi sezvinoonekwa sekanaka rakanaka kuti vawane mhepo kubva kune mumwe munhu paNorth Bridge . Iniwo ndinoda kumira pakati nepakati uye kutarisa kuburikidza nechepakati kuRwizi Thames pasi apa. Mira apo apo motokari inotyisa ichifambisa uye iwe uchanzwa bhiriji richizununguka.
Nearest tube stations: London Bridge (kurutivi rwekumaodzanyemba) kana kuti Tower Hill (kurutivi rwokumusoro).
Mirayiridzo: Kana iwe uchida kuona imwe nzvimbo yekudzivirira nzvimbo muLondon pazuva rimwechete pano pano mazano kune imwe nzvimbo inotevera: Tora bhaji 78 kubva kuNorth Bridge (kuenda kuchamhembe) kuShoreditch.
MuLondon, pfungwa iyi yerudo yakapararira kubva pamabhiriji kuenda kune feni yechipfuva pakatarisana neShoreditch High Street Overground station. Kubva pamusuo wechiteshi / kubuda unongotarisa mhiri kwomugwagwa kusvika kuruboshwe rwako. Iwe haukwanise kuasuwa kwavari sezvo kune zvikwata zvinopfuura zana pano panhamba yekupedzisira.
Pane chimwe chinhu chingaona? Tarisa kunze kweunyanzvi hwemugwagwa munharaunda iyi yeguta. Uye uchidzika pasi Brick Lane kuti uende pakati peimba ye curry uye kutengesa zvipfeko zvemazambiringa mune many boutiques. Spitalfields Market inongotenderera kumakona ezvitoro zvinotengesa zvipo zvevhiriki, zvipfeko uye zvishongo.
Nearest station: Shoreditch High Street (London Overground).
Inodhura neIyo Oyster Card
London kuAberdeen neTeen, Bus, Car uye Air
Top 10 yeLondon Shomfumi
Zvinhu Zvokuita muLondon Apo Rinonaya
Nzira Yokuona Nheyo dzeLondon Inonzi Mail Tunnels
Miti Yakanakisisa yekuIndia yeLondon
10 Nhamba yepamusoro yeBLOOB kuManhattan
Rwendo Rwokufambisa rweLafayette Park muWashington, DC
Mutemo Wekubhejera Mutemo muMetro Detroit
New Mexico Mexico Kudengenyeka kwenyika
Mufananidzo Wekufambisa Kwemitemo Yezvitima kuMusitori, Bishop, California
MetLife Stadium: Travel Guide yeJets Game muNew York
Kumusoro kweChilling uye Snowboarding Zvidzidzo
Sei Vakadzi Vakwegura Vanorayirwa Kuti Vasashanyira kuBrazil?
Mutungamiri kuChikoro B + Motorhomes
Top Belgium Attractions & Activities
Ongororo yeGear: Osprey Shuttle 100 Luggage